कुखुराको भालेदेखि भेडोसम्म, मोटर साइकलदेखि जहाजसम्म चुनाव चिह्न ! - SINDHULI SAUGAT
SINDHULI SAUGAT BREAKING NEWS NEWS UPDATE POLITICS कुखुराको भालेदेखि भेडोसम्म, मोटर साइकलदेखि जहाजसम्म चुनाव चिह्न !
कुखुराको भालेदेखि भेडोसम्म, मोटर साइकलदेखि जहाजसम्म चुनाव चिह्न !
सिन्धुली सौगात डटकम प्रकाशित समय 3:30 AM
काठमाडौं ९ असोज– मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई चुनाव चिह्न वितरण गरेको छ । आयोगले वितरण गरेका चुनाव चिह्न रोचक छन् ।
उम्मेदवारले भोट माग्न जाँदा अब ‘भेडा’लाई भोट दिनुस् भन्नु पर्ने अबस्था आउने भएको छ । आयोगले गान्धीवादी पार्टीलाई चुनाव चिह्न भेडो प्रदान गरेको छ ।
ग्रीन पार्टीले ऊँट चुनाव चिह्न पाएको छ भने मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन नामक पार्टीले कुखुराको भाले चुनाव चिह्न पाएको छ । नेपाल समावेशी पार्टीले सुगा चुनाव चिह्न पाएको छ भने राष्ट्रिय श्रमिक नागरिक पार्टीले पिपलको पात चुनाव चिह्न पाएको छ ।
नेपाल युवा किसान पार्टीले केराको काईयो चुनाव चिह्न पाउदा देशभक्त समाजले जरायो चुनाव चिह्न पाएको छ । नेपाल दर्शन पार्टीले भुइँकटहर चुनाव चिह्न पाउँदा शिवशेना नेपालले डमरु चुनाव चिह्न पाएको छ ।
मितेरी पार्टीले घोडा चुनाव चिह्न पाउँदा आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल नामक दलले ‘लभको संकेत’का रुपमा चिनिने हृदय चुनाव चिह्न पाएको छ । संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टीले जहाज र संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद् नेपालले हेलिकप्टर चुनाव चिह्न पाएको छ ।
हाम्रो नेपाल पार्टीले दुई थुङ्गा सयपत्रिको फूल र देशभक्त पार्टीले ऐना चुनाव चिह्न पाएको छ । चुनाव चिह्नमा महिला र पुरुष पनि राखिएको छ । हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टीले चुनाव चिह्न महिला पाएको छ भने मुस्कान सेना नेपाल पार्टीको चुनाव चिह्न पुरुष छ ।
युवा नेपाल पार्टीलाई मोटर साइकिल चुनाव चिह्न दिएको आयोगले लोककल्याणकारी जनता पार्टीलाई धनुषबाण चुनाव चिह्न दिएको छ । आधुनिक नेपाल पार्टीले बाघ चुनाव चिह्न पाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा चुनावमा ९१ दलले सहभागिता जनाउन पाउने छन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका १९ दललाई पुरानै चुनाव चिह्न वितरण गरिएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीको देब्रे आँखा चुनाव चिह्न ५९ नम्बरमा छ ।